TOP 5 máy ảnh giá rẻ dưới 3 triệu được yêu thích nhất 2022 | Muasalebang - Muasalebang
TOP 5 máy ảnh giá rẻ dưới 3 triệu được yêu thích nhất 2022 | Muasalebang
Đang Đọc: TOP 5 máy ảnh giá rẻ dưới 3 triệu được yêu thích nhất 2022 | Muasalebang in Muasalebang
Ungumthandi wezithombe, uthwebula izikhathi zempilo ngezithombe ezibukhali. Kodwa awunayo imali eningi yokuba neyakho ikhamera nenhle ngobuchwepheshe high. Ungakhathazeki, ngoba esihlokweni sanamuhla sizokwenza buyekeza amakhamera ashibhile angu-5 aphezulu ngaphansi kwezigidi ezi-3 ukuze uthole ikhwalithi enhle. Nakanjani ungaphuthelwa!
1 Ingabe kufanele ukhethe ukuthenga ikhamera eshibhile engaphansi kwezigidi ezi-3?
2 Amakhamera ashibhile aphezulu ayi-5 angaphansi kwezigidi ezi-3 namuhla
2.1 2.1 Ikhamera ye-Sony DSC-W810
2.2 2.2 Ikhamera eshibhile i-Fujifilm Instax Mini 70
2.3 2.3 Canon IXUS 185. Ikhamera
2.4 2.4 Ikhamera ye-Sony DSC W830
2.5 2.5 Canon Powershot A810 Ikhamera
3 Qaphela uma usebenzisa amakhamera ashibhile angaphansi kwe-3 million VND
Ingabe kufanele ukhethe ukuthenga ikhamera eshibhile engaphansi kwezigidi ezi-3?
Uma ucabanga ukuthi ikhamera ibiza kuphela, awukwazi ukuyithenga ngemali encane, uzobe unephutha. Empeleni, ikhamera eshibhile ngaphansi kwe-3 million VND okuningi, kodwa ukuze wazi ukuthi uthenge noma cha, kufanele uhlole ubuhle nobubi bomkhiqizo ukuze wazi ngokucacile.
Intengo cishe iyinzuzo enkulu yamakhamera ashibhile angaphansi kwezigidi ezi-3. Ngale ntengo, ungaba nekhamera enhle, ukuze uthwebule izithombe ezinhle, akukho lutho olungcono kunalokho, noma ngabe umnotho unomkhawulo.
Imvamisa, amakhamera ashibhile anemiklamo ehlukahlukene, ikakhulukazi ehlangene futhi elula. Ngakho-ke kuzoba lula kakhulu kulabo abasanda kuqala ukuthatha izithombe ezichwepheshile noma abafundi besizini yebhuku lonyaka ukuthi bathathe izithombe ezinhle.
Ikhamera eshibhile ngaphansi kwe-VND eyizigidi ezi-3 isenamamodi okulungisa aphelele, lena into noma iyiphi ikhamera enayo njengalezi: imodi yokugxila, i-metering, ukuchayeka, ibhalansi yokukhanya, ibhalansi emhlophe….
Uhlu olugcwele lwezesekeli ezifakiwe kubasebenzisi ezifana nalezi: Ikhadi lememori (umthamo ophansi), ibhethri elishajekayo, ibhande, ikhebula lokuxhuma, incwadi yezincwadi, …
Izinhlobo ezihlukahlukene zemikhiqizo ongakhetha kuzo ngoba manje sekunemikhiqizo eminingi yamakhamera eqondiswe kubathengi abahola kancane, abafundi, nabafundi.
Ngoba kunjalo ikhamera eshibhile ngaphansi kwe-3 million VND Ngakho-ke, ngeke ifakwe ubuchwepheshe bezithombe ezithuthukisiwe noma isekele imiphumela eyahlukahlukene.
Ikhwalithi nayo ngeke ibe yinhle njengamakhamera abizayo, ajwayele ukulimala futhi angenazo izesekeli zekhwalithi.
>>Funda kabanzi: [Review] Amakhamera we-Leica aphezulu angu-5, okufanele athengwe ngo-2021
Amakhamera ashibhile aphezulu ayi-5 angaphansi kwezigidi ezi-3 namuhla
Uma ufuna eyodwa ikhamera eshibhile ngaphansi kwe-3 million VND kodwa usadinga ikhwalithi enhle. Khona-ke ungazizibi iziphakamiso zethu ezinhle, ezithakazelisayo nezithandwa kakhulu ngezansi.
2.1 Ikhamera ye-Sony DSC-W810
Iwumugqa wamakhamera avela kumkhiqizo odumile we-Sony emhlabeni. Kodwa i-Sony Cybershot DSC-W810 inenani elithengekayo kakhulu, ngobuchwepheshe bekhwalithi. Ngokuqondene nomklamo wangaphandle, icala lenziwe ngezinto eziqinile, eziqinile. Ngaphezu kwalokho, njengomkhiqizo ovela kwaSony, i-DSC-W810 inokumelana okuhle kakhulu kwamanzi nothuli. Ngaphezu kokuthwebula izithombe ezicacile, umkhiqizo uyakwazi futhi ukuqopha amavidiyo e-HD standard-definition.
Ngaphandle kwalokho, nge-6x optical zoom lens, inikeza i-engeli ebanzi efika ku-26mm. Ngenxa yalokho, abasebenzisi bangakwazi ukuthwebula sonke isikhathi ngokunembile nangokushesha. Ngaphezu kwalokho, idivayisi iphinde ihlanganiswe nomphumela wesithombe se-Beauty Effect, ngaleyo ndlela ikhiqize izithombe zobuciko ezinhle kakhulu. Ihlanganiswe nobuchwepheshe be-Flash obuthuthukisiwe, ikhwalithi yesithombe iyacaca ngisho nasezindaweni ezinokukhanya okuphansi noma ezihlokweni ezikude. Ikakhulukazi, inzwa ye-CCD engu-20.1 MP kanye nephrosesa ye-BIONZ ephezulu izosiza ukuthuthukisa ukukhanya nokuzwela. Ngenxa yalokho, izithombe ezinemibala engokoqobo ziyadalwa.
Ikhamera ye-Sony Le khamera ifakwe nemodi ye-Intelligent Auto ekuvumela ukuthi ulungise futhi usethe amamodi ngokuya ngokuthandwa ngumsebenzisi, ukuze ahambisane nezimo ezihlukene zendawo yokudubula.
Intengo yesithenjwa: 2,900,000 VND.
2.2 Ikhamera eshibhile i-Fujifilm Instax Mini 70
I-Fujifilm Instax Mini 70 iwumugqa wamakhamera eFilimu aklanywe ngendlela esesitayeleni kakhulu anezikimu zemibala eziyisi-6 ezihlanganisa omhlophe, ophuzi, oluhlaza okwesibhakabhaka, obomvu, omnyama kanye nethusi. Ukusuka lapho, ungakhetha ngokukhululekile umbala ofanelana nesitayela sakho nobuntu bakho. Iza nedivayisi isethi yezinsiza ezihlanganisa ihuku yebhande kanye ne-tripod yezithombe zeqembu. Ngaphezu kwalokho, idivayisi ifakwe ilensi ngaphambili ukusiza ekuthwebuleni izithombe.
Ngaphezu kwalokho, Ikhamera ye-Fujifilm futhi isekela imodi yokudubula ye-Automatic Exposure Control yekhwalithi. Kanye neFlash, ingakwazi ukubala ngokuzenzakalelayo ibhalansi yokukhanya kanye nokulawula isivinini se-shutter ukuze lapho uthatha izithombe, imibala izocaca futhi ibukhali.
Okugqamile kwale khamera ye-Instax Mini 70 futhi kuyisici esizibekela isikhathi. Kungashiwo ukuthi lesi isici esisiza abasebenzisi ukurekhoda kalula izikhathi nomndeni nabangane ngendlela elula. Ngakolunye uhlangothi, ikhamera iphinde ibe nezindlela zokudubula ezi-3 ukukusiza ukuthi ushintshe ngokukhululekile njengoba kudingeka. Okugqame kakhulu imodi ye-Macro evumela ukuthi ukusondela ku-30 ​​kuya ku-60cm. Ihambisana ne-Landscape mode ikusiza ukuthi uthwebule izithombe ze-panoramic.
Intengo yesithenjwa: 2,690,000 VND.
2.3 Canon IXUS 185. Ikhamera
Lona umugqa Ikhamera yeCanon eshibhile ngaphansi kwe-VND eyizigidi ezi-3 ithandwa yintsha eningi, ikakhulukazi leyo esanda kungena endleleni yokuthwebula izithombe. ICanon Ixus 185 ingomunye wemigqa yomkhiqizo wolayini wekhamera ehlangene yeCanon. Ngomklamo ohlangene kakhulu, isisindo esilula, singabanjwa kalula ngesandla noma sifakwe ephaketheni ukuze sihambe noma siphume.
Ngaphandle kwalokho, ikhamera yeCanon IXUS iphinde ihlanganise inzwa engu-20.0 MP ne-DIGIC 4+ processor yesithombe. Ngenxa yalokho, kunikela kakhulu ukuletha abasebenzisi izithombe ezinemibala emihle, imininingwane ecacile ezingeni eliphezulu. Ukwengeza, ngobubanzi be-ISO obuyi-100 kuye ku-800, ungakwazi ukulungisa kalula ukuze uthole isithombe osifunayo. Ikakhulukazi nge-8x optical zoom kanye ne-IXUS 185, ungakwazi ukuthwebula kalula ngaso sonke isikhathi, noma ngabe ukude noma useduze, ngekhwalithi enhle kakhulu.
Ikhamera yeCanon Iphinde ibe nobuchwepheshe beCanon beZoomPlus obuhlukile, obunyusa isici sokusondeza sifike ku-16x. Ivumela abasebenzisi ukuthi bathwebule izinto ezikude ngemininingwane egcwele nemibala.
Intengo yesithenjwa: 2,990,000 VND.
2.4 Ikhamera ye-Sony DSC W830
Lolu uchungechunge lwekhamera olushibhile lwe-Sony DSC W830 enomklamo omusha, onamandla onobuntu kungemuva lesimanje elimnyama. Umshini unesixazululo esingu-20MP, 8x sokusondeza optical esivumela ukuthwebula amafreyimu acacile namaqiniso ngisho ukude. Ngokuhambisana nalokho, ubuchwepheshe bokulwa nokuzamazama be-Sony DSC W830 buletha isipiliyoni esihle kumsebenzisi.
Ngaphezu kwalokho, le khamera ye-Sony futhi inesikrini se-LCD esingu-2.7-intshi, kanye nesici esizibekela isikhathi esisebenziseka kalula uma udubula amaqembu. Ngaphezu kwalokho, umshini futhi wenza kahle imisebenzi eyisisekelo yekhamera yekhwalithi ephezulu ukuze uthathe isikhashana ukukhombisa ithalente lakho lokudubula. Ikakhulukazi, idivayisi futhi inenzwa ye-Super HAD CCD enamaphikseli wangempela afika ku-20.1MP, okuvumela ukuthwebula izikhathi ngokuningiliziwe, umsindo ophansi kanye nekhwalithi yesithombe esihle, esivelele.
Ngaphandle kwekhono layo lokukhiqiza izithombe ezimile ezimangalisayo, ungasebenzisa futhi ikhamera ukurekhoda amamuvi ekhwalithi ephezulu usebenzisa izinga lesithombe se-HD elibukhali. Ngaphezu kwalokho, ngenxa yokuqiniswa kwesithombe se-Optical SteadyShot (Imodi esebenzayo), umphumela wokuzamazama kwekhamera uyagwenywa.
Intengo yokuthengisa yesithenjwa: 2,890,000 VND.
>>>Funda kabanzi: Amakhamera asheshayo ayi-6 aphambili nadume kakhulu
2.5 Canon Powershot A810 Ikhamera
I-Canon Powershot A810 ithola amaphuzu ngomklamo wayo ohlangene nesisindo esilula, ukuze ukwazi ukuyifaka ephaketheni kalula futhi uhambe nayo. Ikakhulukazi, umkhiqizo unesibambo esigobile esiphakanyisiwe esikunikeza isandla esikhululekile, esiqinile, ngakho-ke kunciphisa ukudlidliza kahle. Iphinde isebenzisa inzwa ye-CCD engu-16.0 MP kanye nephrosesa ye-DIGIC 4 ukuze ilethe izithombe ezigqamile, ezigqamile ngisho nasezimeni zokukhanya okuphansi.
Ngaphezu kwalokho, ngenxa ye-DIGIC 4, le khamera ye-Canon ebiza kancane iphinde icubungule izithombe ngokushesha nangobuhlakani. Ngesikhathi esifanayo, nciphisa imininingwane engamanga esithombeni ukuze unikeze isithombe esibukhali kakhulu.
Ikhamera yeCanon Powershot A810 nayo ifakwe ilensi ekwazi ukusondeza okungu-5x nokubuka okubanzi okungu-28-140mm. Ngaleyo ndlela kuvumela abasebenzisi ukuthi bathathe izithombe endaweni evulekile futhi enomoya. Uhlelo lokuzinzisa lwe-Digital IS luyakwazi futhi ukubona izinto ezihambayo ukuze zicutshungulwe kangcono. Ngaphandle kwalokho, le khamera yeCanon futhi inezinhlobo eziningi zokuthwebula ezihlakaniphile ezifakwe ngaphambili ukuze uthathe izithombe ngokukhululeka ngendlela othanda ngayo.
Intengo yokuthengisa yesithenjwa: 2,200,000 VND.
Qaphela uma usebenzisa amakhamera ashibhile angaphansi kwe-3 million VND
Ukuze ukwazi ukusebenzisa Ikhamera eshibhile ngaphansi kwe-VND eyizigidi ezi-3 Uma ufuna ukuba nesithombe esihle futhi uthole isithombe esihle, kufanele unake lezi zindaba ezilandelayo:
Ikhamera kufanele ihlanzwe njalo ukuze kugcinwe idivayisi yakho isebenza kahle kakhulu, futhi kufanele futhi uqaphele ukuthi ungayithinti ilensi yekhamera ngezandla zakho.
Enqubweni yokuhlanza ilensi yekhamera, kufanele usebenzise isifutha ngesandla ukuze ususe konke ukungcola okusekhamera. Ngaphezu kwalokho, abasebenzisi bangaphinda basebenzise okokuhlanza ingilazi bese bekubeka ephepheni ukuze basule kahle, bagweme ukuwa okuqondile kwesicoci sengilazi kulens.
Udinga futhi ukuzilungiselela into engavikela kangcono ikhamera ezimeni zesimo sezulu ezihlukile. Lokhu kugwema ukuthikameza ngokuqondile izithombe lapho zisetshenziswa.
Kufanele ubheke imanuwali yekhamera kanye namathiphu abalulekile nezixwayiso zokugwema nokugcina ukuqina kwekhamera.
Gwema ukushaya ikhamera ngokuqondile ngezinto eziqinile, futhi gwema ukuwisa umzimba wekhamera noma ilensi.
Ngenhla kukhona lonke ulwazi esifuna ukuluthumela kubafundi mayelana nolayini Ikhamera eshibhile ngaphansi kwe-VND eyizigidi ezi-3 kuyashisa emakethe njengamanje. Kungashiwo ukuthi lesi yisinqumo esifanele kubantu abahola kancane, abafundi, nabafundi ukuthi baveze uthando lwabo lokuthatha izithombe. Ngakho-ke ulindeleni ngaphandle kokulondoloza lesi sihloko futhi ubhekisele kuso lapho unesidingo sokukhetha ukusithenga!
>>>Ref: TOP 8 Best Cheap Flycams Genuine 2021 Okufanele Uyithenge
Xem Thêm Top 9 máy tạo kiểu tóc dành cho quý cô tốt nhất 2022 | Muasalebang
Nox Security là gì? Tải nox security diệt virus miễn phí | Muasalebang